Vanopikisa Vanoti Hapana ChekupembereraZuva reKuzvitonga
Kubvumbi 18, 2017
Mutauriri weMDC T, VaMorgan Tsvangirai
Mapato anopikisa emunyika abatana nevana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga achiti hapana chekupemberera sezvo nyika yaondongwa nehurumende yeZanu PF, iyo yagara pachigaro kwemakore makumi matatu nemanomwe.
Mugwaro ravaburitsa pamusoro pezuva ranhasi iri, mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanoti hapana chekupemberera sezvo vana veZimbabwe vari kuramba vachifushirwa nenhamo pamwe nehurombo.
VaTsvangirai vanoti zuva rekuzvitonga iri rave kutorwa sechinhu chemunhu nevari mumasimba ekutonga, vachikanganwa kuti vana veZimbabwe vakazvipira kufira nyika yavo kuti iwane rusununguko.
Vanoti rusununguko rwuzere rwunofanirwa kuonekwa nekuwanda kwemikana pamwe nekusununguka kuzere kwevanhu vose.
VaTsvangirai vakurudzira vanhu kuti vatore mukana uripo kuitira kuti vavhotere gore rinouya munhu anokwanisa kudzosera nyika kumakare apo yaive izere huchi nemukaka…
Mutauriri weMDC T, VaObert Gutu, vanotiwo kana bato ravo rakaklunda musarudzo richashandura maonerwo ari kuitwa zuva rekuzvitonga iri kuburikidza nekuramba zvinhu zvakaita se huwori nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu.
Mutungamiri wePeople’s Democratic Party, VaTendai Biti, vanotiwo panguva iyo nyika yasvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga, chikamu chekutanga chegore rino charatidza kuve chakaomesesa kuvana veZimbabwe, sezvo pasina tarisiro yekuti hurumende ichagadzirisa zvinhu.
VaBiti vanoti Zimbabwe yakasungwa mbiradzakondo nematambudziko akawanda izvo zviri kutadzisa mikana yekuti isimuke zvakare.
Vanoti kana Zanu PF yakaramba iri pachigaro, dikita pamwe neropa revana veZimbabwe, zvichaererera mahara.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube, VaKurauone Chihwayi, vanoti bato ravo rabatana nenyika yose mukupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kwakauya vanhu vatambura.
Asi VaChihwayi vanoti vana veZimbabwe vari kuchemera rusununguko nekuzvitonga kuzere, kwete hurumende yakangogovera minda kunhengo dzeZanu PF chete, ichi bvumidza humbavha nehuwori.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, VaRex Tillerson, vatumirawo mashoko ekukorokotedza Zimbabwe nekusvitsa kwayaita makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga.
VaTillerson vati nyika yavo inodyidzana nevanhu vemuZimbabwe muzvinhu zvakawanda, izvo zvinosanganisirawo shuviro yekuti Zimbabwe ive nehutongo hwejechetere pamwe nebudiro yakanaka.
VaTillerson vati mugore rinotevera, America nevanhu vayo icharamba yakazvipira kuvanhu vemuZimbabwe, uye ishuviro yavo yekuti remangwana reZimbabwe rive rinenge rakajeka.